Wararka - Warshadaha firfircoon - qaabka “Mexico” qaabka e-commerce “Blue Sea”
Warshadaha firfircoon - Qaabka e-commerce ee “Mexican” qaabka “Blue Sea”
Cudurka faafa wuxuu si weyn u badalay qaabkii dadka reer Mexico ay u dukaameysan jireen. Xitaa iyagu ma jecla dukaamaysiga internetka, hase yeeshe, inta dukaamadu xiran yihiin, dadka reer Mexico waxay bilaabaan inay isku dayaan oo ay ku raaxaystaan ​​wax ka iibsiga internetka iyo bixinta guryaha.
Kahor intaan la xirin sababtoo ah COVID-19, ganacsiga elektaroonigga ah ee Mexico wuxuu ku socday isbeddel xoog leh, oo leh mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee koritaanka e-ganacsiga adduunka. Sida laga soo xigtay Statista, sannadka 2020 ku dhowaad 50% dadka reer Mexico ayaa wax ka iibsada internetka, iyadoo uu jiro cudurkan faafa, tirada dadka reer Mexico ee wax ka iibsanaya internetka ayaa qarxay waxaana la filayaa inay kor u kacdo illaa 78% marka la gaaro sanadka 2025-ka.
Wax ka iibsiga xudduudaha xudduudda waa qayb muhiim ah oo ka mid ah suuqa ganacsiga e-mexico, iyadoo qiyaastii 68 boqolkiiba macaamiisha e-mexico ee ka adeeganaya goobaha caalamiga ah, illaa 25% wadarta iibka. Sida laga soo xigtay daraasad uu sameeyay McKinsey Consultancy, boqolkiiba 35 macaamiisha ayaa filaya in cudurka faafa uu soo hagaagayo ilaa ugu yaraan qeybta labaad ee 2021, waxayna sii wadi doonaan inay wax ka iibsadaan khadka tooska ah illaa inta cudurku ka dhammaanayo. Qaar kale waxay aaminsan yihiin in xitaa ka dib markii dillaacay, ay wali dooran doonaan inay wax ka iibsadaan khadka tooska ah sababtoo ah waxay noqotay qayb ka mid ah noloshooda. Waxaa lagu soo waramayaa in qalabka guryaha ay noqdeen kuwa diirada lagu saarayo wax ka iibsiga internetka ee Mexico, iyadoo ku dhowaad 60 boqolkiiba macaamiisha ay iibsadaan qalabka guryaha, sida furaashyada, fadhiga iyo qalabka jikada. Marka la eego cudurka faafa wuu sii fidayaa, isbeddelada qoysku way sii socon doonaan.
Intaa waxaa dheer, caan ka noqoshada warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale keentay fursado horumarinta ganacsiga e-ganacsiga ee Mexico, maaddaama dad badan oo dukaameysanaya ay gujinayaan degellada websaydhada iyagoo adeegsanaya aaladaha warbaahinta bulshada. Muwaadiniinta Mexico waxay ku dhawaad ​​afar saacadood maalintii ku qaataan baraha bulshada, iyadoo Facebook, Pinterest, Twitter iyo kuwa kale ay yihiin kuwa ugu caansan waddanka.
Caqabadaha ugu waaweyn ee ganacsiga e-commerce ee Mexico ayaa ah bixinta iyo saadka, maadaama boqolkiiba 47 keliya dadka reer Mexico ay leeyihiin akoonno bangi, dadka reer Mexico-na ay aad uga walaacsan yihiin amniga koontada. Marka la eego saadka, in kasta oo shirkadaha saadka ee hadda jira ay leeyihiin nidaam wax lagu qaybiyo oo qaan gaar ah, laakiin dhulka Mexico waa mid qaas ah, si loo gaaro qaybinta "kiiloomitirkii ugu dambeeyay", tiro saldhigyo badan ayaa loo baahan yahay in la dejiyo.
Laakiin dhibaatooyinka carqaladeeyay ganacsiga elektaroonigga ah ee Mexico ayaa wax laga qabanayaa, iyo baaxadda ballaaran ee dadka isticmaala e-commerce ayaa ka dhigaya kuwa wax iibiya inay xiiseeyaan inay isku dayaan. Waa la saadaalin karaa iyadoo ay soo ifbaxayaan "badwado cusub oo buluug ah", in aagga ganacsiga e-ganacsiga adduunka uu sii ballaarin doono.